Faadumo Dayib oo Sheegtay in Laga Saaray Gudiga Anshaxa Doorashooyinka oo ay Kamid ahayd - iftineducation.com
iftineducation.com – Faadumo Dayib ayaa sheegtay in lagu soo wargeliyay in laga saaray Liiska Guddiga Ilaalinta Anshaxa iyo Asluubta, kaas oo uu Dhawaan Magacaabay Guddoonka Baarlamaanka.
Guddigan ayaa waxaa magacaabay oo ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyed, waxaana guddigan loo qorsheeyay in ay doorashada ka shaqeeyaan, dhanka ilaalintsa nidaamka iyo Anshaxa.
Faadumo Qaasim Dayib oo la hadashay warbaahinta Magaalada Muqdisho, ayaa sheegtay in lagu soo wargeliyay in laga saaray Guddigaasi, iyadoo sharaxdayna sababta ay u malaynayso in looga saaray liiskaasi.
Waxayna tiri:- “Sababta Liiska la iiga saaray, waxaan u arkaa iney xoojineyso wal-wal-ka ay murashaxiinta iyo shacabka ka qabaan doorashada oo ah in doorashada u dhacdo ama in la yeelo sida dad qaar ay rabaan”
Faadumo ayaa sheegtay inaysan garaneyn sababta kaligeed loo beegsaday, balse ay sheegtay inay tahay qof aanan la’iibsan karin oo cod dheer leh, taasina ay tahay arinta loo dulqaadan waayay.
“Aniga keliya sababta 9-ka qof la iiga dhex saaray, waxaan is leeyahay waxaa la arkey in codkeyga dheer yahay, in doorashada aan ka dhigi doono mid hufan, In aan la ii gadan Karin oo an la ii aamnusin karin.”
Xafiiska Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya ilaa hada ma uusan xaqiijin in Guddiga laga saaray Faadumo Qaasin iyo in kale, marka laga soo tago inay iyada sheegtay oo bogeeda Twitterka ay ku soo qortay.